Uyicwangcisa njani i-5-Amanyathelo amaNqanaba okuThengisa kwi-Intanethi | Martech Zone
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, amashishini amaninzi atshintshele kwintengiso ye-Intanethi ngenxa ye-COVID-19. Oku kushiye imibutho emininzi kunye namashishini amancinci ebaleka ukuza nezicwangciso ezisebenzayo zentengiso yedijithali, ngakumbi ezo nkampani zixhomekeke ikakhulu kwintengiso kwiivenkile zazo zezitena nodaka.
Ngelixa iivenkile zokutyela, iivenkile zokuthengisa, kunye nabanye abaninzi baqala ukuvula kwakhona, isifundo esifundwe kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sicacile- ukuthengisa kwi-Intanethi kufuneka kube yinxalenye yesicwangciso sakho seshishini.
Kweminye, oku kunokoyikisa kuba ukuthengisa kwi-Intanethi yinto entsha. Kubonakala ngathi kukho inani elingenasiphelo lezixhobo, amajelo, kunye neqonga umntu anokukunika lona.
Esi sihlwele, ndingathi ungakhathazeki-ukuthengisa kwi-Intanethi akunzima njengoko kubonakala ngathi.
Ngapha koko, mahlanu kuphela amanyathelo alula ekufuneka uwathathe ukuze uqalise ngentengiso yakho kwi-Intanethi kwaye ikusebenzele.
Yila i-liner enye
Ifayile yocingo kwiwebhusayithi yakho
Yenza ulandelelwano lwe-imeyile yokuthengisa
Yenza ulandelelwano lwe-imeyile lokondla
La manyathelo mahlanu sisakhelo sentengiso esibhalwe nguDonald Miller kunye noGqirha JJ Peterson kule ncwadi Ukuthengisa kwenziwa ngokuLula. Ngokudibeneyo, benza oko sikubiza ngokuba yifanele yokuthengisa / yokuthengisa.
Ngelixa unokufumana inkcazo eneenkcukacha zenyathelo ngalinye kwincwadi, ndiza kubonisa inyathelo ngalinye, ndicacise ukuba kutheni ufuna inyathelo elithile kwintengiso ekwi-Intanethi, kwaye ndikunikeze ngento onokuyenza onokuyisebenzisa kwangoko .
Ngaba ukulungele ukuqala ngokuthengisa kwakho kwi-Intanethi? Masingene ngaphakathi.
Inyathelo 1: Isikhephe esinye
I-liner yakho izivakalisi ezilula ezingama-2-3 ezichaza ingxaki onceda abathengi bayisombulule, isisombululo sakho kule ngxaki (okt imveliso / inkonzo yakho), kunye neziphumo ezinokulindelwa ngumthengi emva kokwenza ishishini nawe.
Isizathu sokuba siqale nge-liner enye kungenxa yokuguquguquka kwayo. Unokufaka i-liner yakho enye kwisayinitsha yakho ye-imeyile, amakhadi eshishini, ii-imeyile ezithunyelwayo ngqo, iwebhusayithi, kunye nayo yonke enye impahla. Ayikhawulelwanga kwii-asethi zakho zentengiso kwi-Intanethi.
Injongo ye-liner enye ilula-inzala ye-pique kwi-brand yakho-kwaye oko kwenziwa ngokuqala ngengxaki oyisombululeyo kubathengi. Kuphela ukuba unokwenza umdla wabathengi bakho kwi-brand yakho, baya kuthi emva koko bawelele kwinxalenye elandelayo yefaneli. Ke jonga kubathengi xa usenza i-liner yakho enye!
Inyathelo lesenzo -Yila i-liner yakho enye ngokuchaza ingxaki ejongene nomthengi, elandelwa sisisombululo osinikezelayo, kunye neziphumo ezinokulindelwa ngumthengi wakho emva kokwenza ishishini nawe.
Inyathelo 2: Ucingo lweWebhusayithi yakho
Inyathelo elilandelayo kwintengiso yakho kukuyila kunye nokuphuhlisa iwebhusayithi esebenzayo. Ndiyazi ukuba loo nto ivakala ngathi iyoyikisa kodwa ungasoloko ukhupha ngaphandle iwebhusayithi yakho ifuna iarhente ukuba awuyilungelanga.
Indawo yakho yewebhu kufuneka ibelula kwaye icace kangangoko kunokwenzeka kwaye yenzelwe ukuba sisixhobo sokuthengisa. Uninzi lwabanini bamashishini bajonga iwebhusayithi yabo njenge-static xa kufanelekile ukuba ikwenzele imali eninzi. Unxibelelwano oluncinci lubangcono, kwaye kwakhona, kokukhona uthetha malunga neengxaki abajongana nazo abathengi kunye nesisombululo sakho, ngcono.
Isizathu sokuba sibandakanye iwebhusayithi kwi-faneli yentengiso kungenxa yokuba iya kuba yeyona ndawo iphambili abantu abenza ishishini nawe kuyo kwi-Intanethi. Nje ukuba uthabathe umdla wabo nge-liner yakho enye, emva koko sifuna ukunika abantu ulwazi oluthe kratya kwaye sibashukumisele inyathelo kufutshane nentengiso.
Inyathelo lesenzo Ngelixa uyila iwebhusayithi yakho, kuyakufuneka ucinge ngeyona fowuni yakho iphambili yokubiza isenzo (i-CTA). Yiloo nto ekufuneka yenziwe ngabathengi ukuze benze ishishini nawe. Oku kunokuba yinto elula efana "nokuthenga" okanye into entsonkothileyo njengo "fumana uqikelelo". Nantoni na efanelekileyo kwishishini lakho. Cinga nge-CTA yakho ephambili kwaye iya kwenza ukuba uyilo lwakho lwewebhu lube noxinzelelo oluncinci wakube ufikile kulo.
Inyathelo 3: Yenza i-lead-Generator
Apha kulapho sifika khona ukuze sibone intengiso yokuthengisa ngendlela yesiko. Umvelisi wakho okhokelayo yimpahla enokukhutshelwa ukuba umthengi unokufumana ukutshintshiselana ngedilesi ye-imeyile. Ndiqinisekile ukuba ubonile iitoni zemizekelo kwi-intanethi.
Ndithanda ukwenza iPDF elula okanye ividiyo emfutshane enokufumana abathengi abanokubakho xa bendinika idilesi ye-imeyile. Ezinye izimvo zomvelisi okhokelayo inokuba ludliwanondlebe kunye nengcali yeshishini, uluhlu lokutshekisha, okanye indlela-yevidiyo. Kuxhomekeke kuwe kwaye ucinga ukuba kuya kubonelela ngexabiso kubaphulaphuli bakho.
Injongo yomvelisi ophambili kukufumana ulwazi olunokunxibelelana nabathengi. Ngaphezulu kokulindelekile, ukuba umntu ukhuphele umvelisi wakho okhokelayo, banethemba elifudumeleyo kwaye banomdla kwimveliso / kwinkonzo yakho. Ukutshintsha idilesi ye-imeyile yomvelisi wakho okhokelayo lelinye inyathelo kwiteli yokuthengisa kunye nenyathelo elinye kufutshane nokuthenga.
Inyathelo lesenzo -Bonisa umxholo wesiqwengana esinokubaluleka kubaphulaphuli bakho kwaye sinokubakhohlisa ukuba bakunike idilesi ye-imeyile. Akunyanzelekanga ukuba ibenzima, kodwa kufuneka ibalulekile kwaye ibaluleke kubantu ozama ukubathengisela.
Inyathelo 4: Yenza ukuLungelelaniswa kwe-imeyile yokuThengisa
Ngoku singena kwinxalenye yokuzenzekelayo yentengiso yethu. Ulandelelwano lwakho lwe-imeyile yokuthengisa zii-imeyile ezi-5-7 ezithunyelwa kumthengi onokubakho xa sele bekhuphele umvelisi wakho okhokelayo. Ezi zinokuthunyelwa iintsuku ezimbalwa ngokwahlukana okanye iiveki ezimbalwa ngokwahlukeneyo kuxhomekeke kubume beshishini lakho.
I-imeyile yakho yokuqala kufuneka ijolise ekuhambiseni i-generator ekhokelayo oyithembisileyo kwaye ayikho enye into-yigcine ilula. Ke kuya kufuneka ube nee-imeyile ezininzi ezilandelayo kulandelelwano lwakho kugxilwe kubungqina kunye nokoyisa inkcaso eqhelekileyo ekuthengeni imveliso / inkonzo yakho. I-imeyile yokugqibela kulandelelwano lokuthengisa kufuneka ibe yi-imeyile ethengisa ngokuthe ngqo. Sukuba neentloni- ukuba umntu ukhuphele umvelisi wakho okhokelayo, bafuna le unayo. Bafuna ukukholisa kancinci.
Kule ndawo siqala ukubona abathengi abanokuba ngabathengi bokwenyani. Isizathu sokuba sinokulandelelana kwentengiso oluzenzekelayo kukuba ungatshiswa kukuzama ukusoloko uthengisa kwithemba lakho- ungayibeka yonke le nto kwi-autopilot. Kwaye injongo yokulandelelana kwentengiso yakho iyazichaza-vala isivumelwano!
Inyathelo lesenzo -Kucinga ii-imeyile ezi-5-7 ozifunayo kulandelelwano lwakho lokuthengisa (kubandakanya ukuhambisa umvelisi okhokelayo, ubungqina, ukoyisa inkcaso, kunye ne-imeyile yokuthengisa ngokuthe ngqo) kwaye ubhale. Akudingeki ukuba zide okanye zintsonkothe- enyanisweni, ngokulula kubangcono. Nangona kunjalo, umthetho wegolide kukuba kufuneka zichaphazele kwaye zinomdla.
Inyathelo 5: Yenza ukulandelelana kwe-imeyile yokuKhulisa
Ulandelelwano lwakho lwe-imeyile lokondla lukhona naphina ukusuka kwii-imeyile ezi-6-52 ngokuxhomekeke kwindlela okhuthaze ngayo kunye ne-gung-ho malunga nentengiso ye-imeyile. Ezi imeyile zithunyelwa rhoqo ngeveki kwaye zinokuba yiyo nantoni na evela kwiingcebiso, iindaba zenkampani / zeshishini, indlela yokwenza ngayo, okanye enye into ocinga ukuba ingabaluleka kubaphulaphuli bakho.
Isizathu sokuba silandelelaniswe ngokulandelelana kungenxa yokuba nasemva kokukhuphela umvelisi wakho okhokelayo kunye nokuhamba ngokulandelelana kwakho, abanye abathengi basenokungakulungeli ukuthenga. Kulungile. Nangona kunjalo, asifuni kulahlekelwa ngabathengi abanokubakho. Ke, uhlala ubathumela ii-imeyile ukubakhumbuza ukuba imveliso / inkonzo yakho sisisombululo kwingxaki yabo.
Kulungile ukuba abantu abade bafunde okanye bavule i-imeyile yakho. Olu lungelelwaniso lusabalulekile kuba igama lakho lebrendi liyavela kwibhokisi yemiyalezo ye-imeyile, ehlala ikwisixhobo sabo esiphathwayo. Ke, amathemba ayakhunjuzwa ngokuqhubekayo ukuba inkampani yakho ikhona.
Nje ukuba abathengi abanokubakho bahambe ngolu luhlu lokondla ungababeka kolunye ulungelelwaniso lokondla okanye ugqithisele kolunye ulandelelwano lokuthengisa. Ukuqinisekisa ukuba awulahleki nakubani na kwifanele yakho nakwishishini kukuphambili kwengqondo.
Inyathelo lesenzo Chonga umxholo wokukhulisa ukulandelelana kwe-imeyile. Ngaba uza kuthumela iingcebiso ezinxulumene nomzi mveliso wakho? Njani-ku? Iindaba zeNkampani? Okanye mhlawumbi enye into. Uyagqiba.
Apho unayo! Inyathelo eli-5 lokuthengisa okulula onokulisebenzisa wena kunye neqela lakho.
Ukuba ukutshintshela kwintengiso ekwi-Intanethi kube ngumceli mngeni, ke nika le nkqubo-sikhokelo ilula. Ndiyakuthembisa uza kubona iziphumo ezingcono kunokuba unganaso isicwangciso esili-intanethi kwaphela.
Kwaye ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nenkampani eyenze esi sikhokelo sentengiso, jonga IbaliBrand.com. Banazo iindibano zocweyo kwaye iindibano zocweyo zabucala ukufundisa wena neqela lakho ngesakhelo esilula.
Ukuba ungathanda ukuba nefaneli yentengiso eyenzelwe ishishini lakho ilandele imigaqo yeBrandBrand, ke fikelela kwiqela lethu I-Arhente yeBhunga.
Qhagamshelana ne-Arhente Boon
Nanku kwintengiso yakho kunye nokukhula kweshishini.
tags: I-arhente yolwaziU-donald millerUlandelelwano lwe-imeyilejj Petersonjenereta ekhokelayookhokelayoukuthengisa kwenziwe lulaKhulisa ukulandelelana kwe-imeyileI-liner enyeUlandelelwano lwe-imeyile yokuthengisayokuthengisawebaliifayile
URyan Crozier ngumseki we I-Arhente yeBhunga, iarhente yentengiso yedijithali egxile ekuncedeni abantu benze okuhle kwi-Intanethi. Uneminyaka eli-15 + yamava entengiso kwaye uncede uninzi lwamashishini ukumilisela isakhelo seBaliBrand kwintengiso yabo.